Filtrer les éléments par date : dimanche, 24 juin 2018
dimanche, 24 juin 2018 22:10
Fambolem-bary any Vietnam: Mamokatra indroa ka hatramin'ny in-3 isan-taona, 7 tonnes/ha
Mitovitovy ny eto Madagasikara, indrindra fa ny afovoan-tany izay misy tendrombohitra sy lohasaha ny fambolem-bary any Vietnam.
Tsy misy tany mipetrapetraka fa dia misy voly vary na voly avotra avokoa.
Vietnam no mpanodrana vary faharoa maneran-tany, raha 40 taona lasa izy izay no potiky ny ady ary tsy nahavelon-tena ara-bary.
- Raha tamin'ny taona 1970 izy dia namokatra vary 10 millions de tonnes
- Ny taona 2000, namokatra 220% avo heny ka lasa 33 millions de tonnes
- Amin'ny taona 2020 dia tombanana ho 64 millions de tonnes.
Ka raha 500 dollars ny tonne eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia ahatratra 32 milliards de dollars isan-taona ny azy no vola miditra.
dimanche, 24 juin 2018 22:00
Kitra-Mondial 2018: Mpampidi-baolina be indrindra hatreto i Harry Kane
Lalao roa, namono baolina dimy i Harry Kane. Hatreto dia ity kapitenin’i Angletera ity no mpampidi-baolina be indrindra amin’ity fiadiana ny tompondaka erantany amin’ny baolina kitra tanterahina any Rosia ny 14 jona ka hatramin’ny 15 jolay 2018 ity, taorian’ny andro roa nilalaovany hatreto.
Nampidi-baolina efatra avy kosa hatreto i Romelu Lukaku (Belgique) sy Cristiano Ronaldo (Portugal).
dimanche, 24 juin 2018 21:56
Dama: Ho kandida filoham-pirenena
Hanambara ny ho firotsahan-kofidiany amin’ny fifidianana filoham-pirenena i Dama na Rasolofodraosolo Zafimahaleo. Etsy Antanimena-Antananarivo no hanambarana izany ny 30 jona 2018 ho fanatanterahana ny « Antso Valimbabena atao amin’ny Mpiara-belona ho an’i Madagasikara ».
dimanche, 24 juin 2018 18:19
“Fandrava”: Nolalaovina an-tsehatra tany Alaotra
Tantara amin’ny onjam-peo, nanakoako tao Ambositra ny “Fandrava”. Niitatra tamina tanàna hafa ny fandefasana izany, ary dia onjam-peo manodidina ny 70 manerana ny Nosy no nandefa azy io.
Nentin-dry Simon Nomenjanahary mitety faritra ny tantara ary nolalaovin’izy ireo an-tsehatra taty Alaotra Mangoro.
dimanche, 24 juin 2018 18:06
Fianarantsoa: Herinandro fanamarihana ny fetim-pirenena
Tanterahina eto amin'ny Katedraly Anglikana eto Fosarato Manaotsara, ity tolakandron'ny alahady ity ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana iarahana amin'ny FFKM.
Izany dia isan'ireo fanetsehana manodidina ny fanamarihana ny fetim-pirenena sy ny faha-58 taonan'ny Foloalindahy.
Efa tontosa tao anatin'ny herinandro ireo fotoam-pivavahana notarihin'ny Fiangonana Advantista sy ny an'ny fivavahana Silamo.
Misy ihany koa ny fanentanana sivily izay ahitana “podium” roa karazany, dia ny tantanan'ny Kaominina renivohitra sy ny karakarain'ny fiadidiana ny Repoblika amin'ny alalan'ny fampisehoana niantsoana mpanakanto fanta-daza.
Miavaka ny hetsika fanamarihana amin'ity taona ity noho ny fanilovana manonkana ny Lapan'ny Tanàna Tsianolondroa.
dimanche, 24 juin 2018 18:02
Fetim-pirenena: 2730 ireo hanao matso etsy Mahamasina
Nisy famerenana faobe farany notanterahina teo Mahamasina androany, ho an’ireo handray anjara amin’ny matso hanamarihana ny fetim-pirenena sy ny tsingerintaona faha-58 ny Foloalindahy. 2730 eo izy ireo, avy amin’ny Tafika (1778), Zandarimariam-pirenena (579), mpamonjy voina (37), mpiandry fonja (290) ary koa mpiasan’ny rano sy ala (46).
Hitarika ny fibaikoana fandrindrana ny matso eo Mahamasina ny 26 jona 2018 ny Jeneraly Ramasitera avy amin’ny Tafika anabakabaka.
Niatrika ny famerenana farany teo amin'ny kianjabe Mahamasina ny minisitry ny fiarovam-pirenena, Jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier sy ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, Jeneraly Randriamanarina Jean Christophe.
dimanche, 24 juin 2018 18:01
Tanambao Verrerie – Toamasina: Mpivarotra fahana finday maty notifirin’ny jiolahy
Ny sabotsy 23 jona tokony tamin’ny 5 ora hariva, no nitranga ny fanafihana mitam-basy teo ambony tetezan’i Tanambao Verrerie.
Tovolahy iray mpamongady fahana finday no maty tsy tra-drano voatifitra teo amin’ny lohany. Tavela tao amin’ny lohany ny bala. Handeha hamonjy fodiana any Tsarakofafa izy izao nisy nitifitra izao.
Lasan’ny jiolahy ny vola tao anaty sakaosy sy ny fahana, avy eo nitsoaka tamin’ny moto ireto andian-jiolahy ireto.
dimanche, 24 juin 2018 15:13
Halatra sa hasomparana: Nisy naka indray ny tariby 500m an’ny JIRAMA
Tariby mitondra herinaratra matanjaka mirefy 500m, indray no nisy nangalatra tao Tanandava-Toamasina ny alin’ny alakamisy 21 jona nifoha ny zoma 22 jona 2018.
Ny zoma ihany dia niezaka nanolo ny tariby very, hiverenan’ny famatsiana herinaratra ny teknisian’ny JIRAMA Toamasina nisorohana ny tsy fisian-jiro.
dimanche, 24 juin 2018 15:08
Assemblée Nationale: Le siège du député de Vohémar reste vacant depuis 4 mois
La Haute Cour Constitutionnelle (HCC) n’a pas encore donnée suite à la saisine du Président de l’Assemblée Nationale aux fins de nomination de successeur du Député Abdillah, décédé le 21 février 2018. Le siège du député de Vohémar reste vacant depuis 4 mois.
Le dossier reste en instance à la HCC.
dimanche, 24 juin 2018 14:32
Analanjirofo: Be ny fanararaotana ateraky ny fahasimban’ny tetezana ao Antaratasy (RN5)
Vokatry ny fahasimban’io tetezana ao Antaratasy io dia tafakatra 12.000 Ariary ny sarandalana Toamasina hatrao Fenoarivo Atsinanana, raha 10.000 Ariary izany teo aloha.
1.800 Ariary ny kilaon’ny vary “stock tampon” hany mora indrindra, 2.100 Ariary ny makalioka.
Vokatr’io tetezana simba io hatrany dia mihitsoka eto Toamasina ny milina famokarana herinaratra, hanoloana ny fitaovana ao Vavatenina izay efa ratsy.